Shirkii Dhalinyaradda oo Muqdisho lagu soo gabagabeyeey (Warmurtiyeed) – Radio Daljir
Diseenbar 27, 2018 4:39 g 0
Wasiirka wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya, Marwo; Khadiijo Maxamed Diiriye, ayaa Maanta soo xirtay shirweynaha Qaran ee Dhalinyarada.
Shirweyniha Qaran ee Dhalinyarada ayaa laga soo saaray murtiyeed ka kooban 6 qodob , iydoo ay kasoo qayb galeen Xildhibaanno, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ay ka mid tahay Duuliye sare, Asli Xasan Cabaade.
Wasaaradda dastuurka ayaa Dhalinyarada u qaybisay qoraallada dastuurka KMG ah,iyadoo Agaasimaha guud ee wasaarada dastuurka, Maxamed Abuukar Zubeyr, uu Dhalinyarada ku boorriyey in ay dastuurkooda bartaan .
Shirkan oo Muddo laba Cisho ah ka socday Magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray war murtiyeed, kaasoo u qornaa sidan:-
SHIRWEYNAHA QARAN EE DHALINYARADDA (SANNADKA 2AAD)
Shirweyhanaha Qaran ee Dhallinyarada Soomaaliyeed sannadka 2aad wuxuu ka dhacay magaalada Muqdishu 26¬27 December 2018 waxaana isugu yimid ergooyin matalaaya dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhammaan Gobolada Dalka (Ergada Dhallinyarada Dowlad Goboleedyada, Ergada Dhallinyarada Gobolka Banaadir, Ergada Dhallinyarada Beelaha Gobolada Waqooyi, Ergada Dhallinyarada Baahiyaha gaarka ah qaba, Ergada Dhallinyarada Beelaha laga tirada badan yahay iyo Qaar ka mid ah Ergada Ururada iyo Daladaha Madaxa banaan).
Ujeedooyinka shirku waxay ahayd inuu noqdo madal ay dhallinyarada Soomaaliyeed ku soo bandhigaan aragtidooda, ugana tashadaan aayahooda.
In fursad loo siiyo dhallinyarada ka qeybgalka Siyaasadda Dalka, taasoo ah halkudhigga shirka ee ka qeybgalka Siyaasadda Dalka oo ah (Kaqeybgalka Dhallinyarada Siyaasadda Dalka).
In la xoojiyo isdhexgalka dhallinyarada
In la muujiyo kartida iyo awooda dhallinyaradeena
In la helo ra’yiga iyo fikradaha dhallinyarada ee ifinaaya mustaqbalka aayahooda.
In dhallinyarada lagu dhiira geliyo wadaniyadda iyo wada jirka oo kaliya in lagu gaari karo dal nabad ah, nolol barwaaqo ah, iyo nolol horumarsan.
Dhaqangelinta Siyaasada Qaran ee Dhallinyarada iyo doorka dib u eegista Dastuurka.
In dhallinyaradda laga qeybgaliyo hoggaanka iyo haggida dalka iyagoo talo ku yeelanaya cida la dooranayo iyo cida wax dooraneysa.
In Dastuurka Soomaaliya lagu cadeeyo xuquuqaha dhallinyarada
In la abuuro Gole Dhallinyaro Qaran oo aan KMG aheyn si uu u noqdo meel ay hoggaamiyayaasha dhallinyarada ku sameysmaan kuna bartaan hoggaaminta wanaagsan, looguna ol-oleeyo danaha dhallinyaradda Soomaaliyeed.
In la helo Siyaasad Qaran ee Waxbarashada Dalka doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin oo si cad uga dhex muuqda.
In la helo waxbarasho bilaash ah oo loo simanyahay, ayadoo muhiimad gaar ah lasiinayo gabdhaha iyo da’yarta iyo Dhallinyarada Baahiyaha gaarka ah qaba.
In dhallinyaradda loo abuuro xirfado ay ku shaqeystaan ayadoo lagu duulaayo Qorshe Howleedka Wasaaradda ee ku jira Tubta Arrimaha Bulshada ee Golaha Wasiirada Xukuumadda Mudane Xassan Cali Kheyre
In la helo wacyigalin balaaran kuna saleysan nolasha dhibta leh oo ay la kulmaan dhallinyarada tahriibta, ayadoo loo adeegsanaayo Warbaahinta (Wecyigelin Diineed iyo Hal Abuurka Suugaanta Soomaalida).
In la helo lambar lagala xiriiro laamaha nabadgalyada gaar ahaan Caasimadda si ay dhallinyarada usoo gudbiyaan qataraha Amni dadka ku howlan ee deegaanada xaafadahooda ku nool.
In si cad uga muuqato Qorshaha horumarinta qaranka in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur, laguna shaqo geliyo sida: Dhismayaasha guud, Dhismaha Wadooyinka isku xira Gobolada, Dekadaha iyo Garoomada Diyaaradaha, Garoomada Ciyaaraha Dalka, si ay gobolada uga helaan dhallinyarada fursad shaqo, taasoo noqoneysa fursad shaqo abuur dalka oo dhan ah.
In la dhiirigaliyo wax soosaarka dalka, ayadoo dowladda ay si gaar ah u dhaqaaleyneyso beeraleyda, kaluumeysatada, xoola dhaqatada, iyo warshadleyda, gaar ahaan dhallinyarada xirfadahaas ku shaqeeysta.
SAAMEYNTA WARBAAHINTA EE DHALLINYARADA
In Milkiiyasha Warbaahinta daka ay sare u qaadaan xirfadaha wariyayaasha dhalinta yar ayaga oo siinaya tababaro iyo waxbarasho warbaahineed si ay u ogaadaan waxa ay tabinayaan iyo meelaha ay ka tabinayaan (Gabdhaha iyo Wiilasha)
In marwalba la adkeeyo lana hubiyo Madax Banaanida Warbaahinta iyada oo la dhowrayo sharciga Saxaafadda.
Shirweynuhu Wuxuu Baaq nabadeed u dirayaa Deegaanada ay kasoo cusboonaadeen colaadaha ay nabad ku badashtaan si dhallinyarada aan looga dhigan xaabada dabka lagu shido.
Shirweynuhu wuxuu hambalyo u dirayaa Guddoomiyaha Dalada Dhallinyarada Bayaan ee Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Aweys Axmed Sardheeye oo uu noqday Xildhibaan ka mid ah Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Puntland.
Shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa Madaxda Dowlada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guud ahaan, Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga Xukuumadda JFS, Golaha Dhallinyarada Qaranka ee KMG ah oo lahaa qabanqaabada Shirweynaha Qaran Sanadka 2aad oo ka dhashay kormeerkii ay kusoo mareen Sanadkan 2018-ka Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir iyo Latashiyadii ay la sameeyeen Qeybaha kala duwan ee Dhallinyarada Soomaaliyeed ee Ergooyin matalaaya ay xaadir ku yihiin Shirweynaha 2aad ee Dhallinyarada Qaranka.
Hal Kudhigga Sanadka 2018-ka waa:-
“HORUMAIRNTA IYO KAQEYBGALKA DHALLINYARADA EE SIYAASADDA DALKA”
Madaxweynaha Puntland oo si kaduwan sidi hore Garoowe loogu soo dhaweyeey (Daawo)